ဘောလုံး ခရေဇီ တစ်ယောက် အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ကြည့်ထားသင့်တဲ့ ဘောလုံး Movie များ . . . - SPORTS MYANMAR
ဘောလုံး ခရေဇီ တစ်ယောက် အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ ကြည့်ထားသင့်တဲ့ ဘောလုံး Movie များ . . .
သင်ဟာ ဘောလုံး ကို ဘယ်လောက် အထိ ရူးသွပ် သလဲ . . . တစ်ပတ် တစ်ခါ လာတဲ့ အချိန်လောက် လား ၊ ကလပ် ပွဲ ၊ နိုင်ငံ ပွဲ ၊ ရပ်ကွက် ပွဲ မရွေးသူလား . . . ရုပ်သံ ဖန်သားပေါ်ကနေ လား ၊ မြက်ခင်းစိမ်းတွေ ကို အနီးကပ် မြင်ရတဲ့ အထိလား ။ ဘောလုံး ပွဲတွေ နဲ့ ကစား သမားတွေ ကိုပဲလား ၊ ဘောလုံး နဲ့ ပတ်သက်တာ မှန်သမျှလား . . . ။ “ဗုတ် ဗုတ်” ဆိုတဲ့ ဘောလုံး အသံ ဟာ သင့်ရဲ့ နှလုံးသားကို ဘယ်လောက် အထိ ကိုင်လှုပ်စေ နိုင်သလဲ ၊ သင့်ရဲ့ သွေးတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ဆူပွက်စေ နိုင်ပါသလဲ . . .
သင်ဟာ ဥရောပ က ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ဘောလုံး ပွဲစဉ်တွေကို ရူးသွပ် ခုံမင်တဲ့ သူ တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ဒီ တစ်ပတ် နိုင်ငံ ပွဲတွေ ဟာ တကယ်ကို ပျင်းရိ စရာကောင်း နေမှာ အမှန် ပါပဲ ။ လက်ရွေးစင် အသင်း ကိုယ်စီ က သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြပေမယ့် ဒါတွေ ဟာ ကိုယ်နဲ့ မသက်ဆိုင် သလို ဖြစ်နေ မှာ အမှန်ပါ ။
ဒီလိုမျိုး ပျင်းရိ စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေ ကို ဖြတ်ကျော်မယ့် သူတွေ အတွက် ဘောလုံး ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ချင် ပါတယ် ။ ရှည်လျားလှပြီ ဖြစ်တဲ့ အချိန် ကာလ တစ်လျောက် ဘောလုံး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းများစွာ ထွက်ရှိ ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ ဒီအထဲ က မှ ကောင်းနိုး ရာရာ လေးတွေ ကို ပြန်လည် ထုတ်နှုတ် တင်ဆက်ပေး လိုက်ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .
၁ ။ Escape To Victory ( 1981 )
နာမည်ကျော် ဘောလုံး သမား ပီလီ ၊ ဘော်ဘီမိုး တို့ ပါ၀င် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သလို ဟောလိ၀ုဒ် ရဲ့ အကျော် အမော် မင်းသားကြီး စတားလုံး ၊ မိုက်ကယ်ကိန်း တို့ ပါ၀င် ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကြီး ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း က မဟာမိတ် စစ်သုံ့ပန်းတွေ နဲ့ နာဇီ ဂျာမန် ထောင်စောင့် တို့ရဲ့ ဘောလုံး ပွဲ ကို ဦးတည် ရိုက်ကူထားတဲ့ ဒီ ဇာတ်ကား ဟာ ဘောလုံး ရသ ကို သာမက ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှား မှု ကိုပါ ပေးစွမ်း နိုင်မှာ အသေ အချာ ပါပဲ ။
၂ ။ Goal! The Dream Begins ( 2005 )
Goal နံပါတ် ၂ နဲ့ ၃ ဇာတ်ကားတွေ ကတော့ တော်တော်လေး ခြာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အစပြုရာ နံပါတ် ၁ ဇာတ်ကား ကတော့ တကယ်ကောင်းခဲ့ ပါတယ် ။ အမေရိကန် နိုင်ငံ ထဲ ကို ခိုးဝင် နေထိုင် ခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကို မိသားစုက ကောင်လေး ( ဆန်တီယာဂို မူနက်ဇ် ) ရဲ့ ဘောလုံး အရည် အသွေးတွေ ကို နယူးကာဆယ် အသင်း ကင်းထောက် ဟောင်း တစ်ဦး က တွေ့ ရှိရာကနေ မက္ကဆီကို သားလေးရဲ့ ကြီးမားတဲ့ စွန့်စားခန်းတွေ အစပြု ခဲ့တော့ တာပါပဲ ။
၃ ။ Shaolin Soccer ( 2001 )
ဘောလုံး နဲ့ မပတ်သက်တဲ့ သူတွေတောင်မှ ဒီကားကို ကြည့်ဖူး ပါတယ် ။ ဘောလုံး ပရိသတ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ဒီကားကို မကြည့်ဖူးရင်တော့ တကယ် ခေတ်နောက်ကျ နေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ ။ ဘောလုံး ကစားနည်း ရဲ့ စည်းစနစ် ကျမှု ၊ လှည့်ကွက်တွေ ၊ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ ကိုတော့ ဒီကား ကနေ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ် ပိတ်လို့ မရတဲ့ အထိ ရီရမယ် ဆိုတာ တော့ အာမခံနိုင် ပါတယ် ။
၄ ။ The Dammed United ( 2009 )
အင်္ဂလိပ်တွေ ကတော့ ဒီကား ဟာ ထွက်ပြီး သမျှ ဘောလုံး ဇာတ်ကားတွေ ထဲ မှာ အကောင်းဆုံး လို့ ညွှန်းဆို ကြပါတယ် ။ နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ( ထိုစဉ် က ဥရောပ ဖလား ) ၂ လုံး ရယူပေး ခဲ့တဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး ဘရိုင်ယန် ကလောက် ရဲ့ ၄၄ ရက်သာ ကြာမြင့်တဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက် နည်းပြဘဝ ကို ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ကလောက် ဟာ လိဒ် ကနေ ထွက်ခွာ အပြီးမှာ နော်တဝင်ဟမ် ဖောရက်စ် ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကြီးကျယ် ခမ်းနားမှုတွေ စတင်ခဲ့ ပါတယ် ။
၅ ။ Bend It Like Beckham ( 2002 )
ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ကို အရူး အမူး နှစ်သက်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဟာ ဘောလုံး အားကစား မှာ အောင်မြင်ဖို့ အတွက် မိဘတွေ ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒီကားလေး ဟာ လည်း တကယ်ကို ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ မိသားစုအဆင့် ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
၆ ။ Mean Machine ( 2001 )
ဘောလုံး ကို အခြေခံ ထားတဲ့ နောက်ထပ် ဟာသ ဇာတ်ကားလေး တစ်ခုပါ ။ ဒီအထဲ မှာ ဘောလုံး ကနေ သရုပ်ဆောင် အဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ ဗင်နီဂျုံးစ် က အဓိက ဇာတ်ကောင် အဖြစ် ပါ၀င် ခဲ့ပြီး ဂျေဆန် စတပ်ဟမ် ( Transporter မင်းသား ) လည်း ပါ၀င် အားဖြည့် ထားခဲ့ ပါတယ် ။ လုပ်ပွဲ ကစားမှုကြောင့် ထောင်ကျခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ( ဗင်နီဂျုံးစ် ) ဟာ ထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းသားတွေ ကို စုစည်းပြီး ထောင်စောင့် တွေ နဲ့ မြက်ခင်း ပေါ်မှာ တစ်ပွဲ တစ်လမ်း နွဲတော့ တာပါပဲ . . .
၇ ။ Green Street ( 2005 )
Green Street Hooligan လို့လည်း ခေါ်တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း ဟာ ဘောလုံး အကြောင်း ဆိုတာထက် ဘောလုံး ကို အရူး အမူး အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ် ပါတယ် ။ Lord of the ring မင်းသား ( Elijah Wood ) ပါ၀င်တဲ့ ဒီ ဇာတ်လမ်း ဟာ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ အကြားမှာ ဘယ်လိုမျိုး ညီအကိုစိတ်ဓါတ်တွေ ထားရှိကြတယ် ဆိုတာ ၊ အင်္ဂလန် မှာ ပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်အထိ အားပြိုင်မှု ပြင်းထန် ကြတယ်ဆိုတာ တွေကို တွေ့မြင် ခံစား ရမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
၈ ။ Will ( 2011 )
အင်္ဂလန် တောင်ပိုင်း မှာ ၀ီလ် လို့ ခေါ်တဲ့ ကလေးငယ်လေး တစ်ဦး ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ သူ ရူးရူး မူးမူး အားပေး တာက လီဗာပူး အသင်းပါ ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှာတော့ လီဗာပူး ဟာ ဥရောပ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အောင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလားကြီး နဲ့ လက်တကမ်း အကွာ ကို ရောက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ အစ္စတန်ဘူလ် မှာ ကစားမယ့် ဖိုင်နယ် ပွဲ ကို ဖန်သားပြင်ပေါ် ကနေ အားပေးရုံလောက်နဲ့ မလုံလောက်တော့တဲ့ အချိန် မှာတော့ ၀ီလ် တစ်ယောက် အိမ်ကနေ ခိုးထွက် ကာ မိုင်ပေါင်း ထောင်ချီ ဝေးတဲ့ ( အင်္ဂလန် မှ သည် တူရကီ သို့ ) စွန့်စားခန်း ကို စတင် ခဲ့ ပါတော့တယ် . . .
အခြားသောဘောလုံး ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေ လည်း ကျန်ရှိပါသေးတယ် ။ အခုဖော်ပြ ထားတာတွေ ကတော့ လက်တစ်ဆုပ်စာမျှ ဇတ်ကားကောင်းတွေ သာ ဖြစ်ပါကြောင်း . . .